Ụlọ ọrụ kapeeti kapeeti, ndị na -ebunye ya - ndị na -emepụta kapetị China
PVC na -adịgide adịgide ma na -echebe ụzọ mbata ụgbọ ala ụkwụ kapeeti
E jiri ya tụnyere akwa akpụkpọ anụ ọdịnala, akwa akwa, akwa onye na -egbu ya nwere ike ịkpụ ma kpụọ ya, ọ dịkwa mma nhicha, ọ dịghị mfe ime ka ụgbọ ala ahụ na -esi isi.
Nweta ụlọ ọrụ na -ebunye ụlọ ọrụ China PVC PVC ala
Ihe mkpuchi akwa silk coil nwere ike belata ike ọgwụgwụ ụkwụ ma nwekwuo ụtọ ịnya ụgbọ ala. Ihe mkpuchi akwa silk coil nwere elasticity, ikike ibu ibu dị mma, na enweghị nkwarụ mgbe a pịrị apị.
Ọnụahịa ịre ahịa ọkụ ọkụ PVC kapeeti maka ụgbọ ala
Dị ka ihe eji eme akwa akwa, akwa akwa mgbanaka silk nwere uru pụrụ iche ya, dị ka ịhụ nkasi obi mgbe ị na -eme nhicha dị mfe yana nlekọta dị mfe.
Ala mkpuchi PVC dị ọnụ ala ụgbọ ala kapeeti mpịakọta kapeeti kapeeti
Iji ihe eke na gburugburu ebe obibi na -emepụta akwa ụkwụ, nwere njiri mara mma ma mara mma. Nkọwa ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị.
Igwe mkpuchi ụgbọ ala dị elu dị elu dị larịị PVC ụkwụ ute kapeeti
Akụrụngwa nke ihe mkpuchi ụgbọ ala ụgbọ ala bụ PVC, nke dị nro ma dịkwa mma ma e jiri ya tụnyere akwa akwa ụkwụ ndị ọzọ, ọ bụkwa ihe mgbaru ọsọ ụkwụ ụgbọ ala nke oge anọ.
Ngwa ụgbọ ala ahaziri iche ụlọ nrụpụta ụgbọ ala ala akwa kapet mpịakọta
PVC mkpuchi ụgbọ ala ute na-anaghị ada ada, na-adị mfe ịsacha na nlekọta nke ọma, enwere ike ebipụ ya na ebe ọ bụla masịrị ya. Biko kpọtụrụ anyị ozugbo maka ozi ndị ọzọ.
Ngwa ụgbọ ala ihu igwe kapeeti ihu igwe PVC niile dị na agba dị ọcha
Ihe mkpuchi ụgbọ ala silk nwere ike siri ike izo unyi ma nwee ike idobe ụgbọ ala ahụ ogologo oge.
Ihe mkpuchi ala PVC na -enweghị mmiri maka ụgbọ ala maka ime ụlọ
Akpụkpọ ụkwụ okirikiri silk nwere ọrụ mgbochi unyi na ihe mgbochi mmiri, usoro okirikiri silk pụrụ iche nwere ike igbachi iru unyi anaghị awụpụ, debe ụgbọ ala ahụ ọcha ma na-edozi ya oge niile, dị mfe nhicha, nchapu nke dị ọcha.
Eco-PVC enyi na enyi Eco Loop Car Foot Mat Auto Carpet maka Vechicle Interiors
Ọdịdị akwa akwa mgbanaka silk dị mfe ilekọta, dị mfe nhicha, nwere ike igbochi uto nke nje, nwere ezigbo nchekwa yana mmetụta antibacterial, nchekwa zuru oke nke ịdị ọcha n'ime ụgbọ ala.
Anti Slip PVC Ugboro abụọ Agba ụgbọ ala ụlọ
Akpụkpọ ụkwụ mgbanaka silk adịghị ekwesi ike n'okpuru obere okpomọkụ yana agbazekwala n'okpuru oke okpomọkụ. Nwere ezigbo nguzogide ihu igwe, n'afọ niile, ma oyi, okpomọkụ anaghị agbarị, ọ naghị ada ada, ogo a pụrụ ịdabere na ya na ogologo okirikiri ojiji ya.
PVC Coil Car Mat na-adịgide adịgide nke na-enweghị mmiri na mpịakọta ya na Anti-slip Back
A na-eme okirikiri silk nke Benson site na eke na gburugburu ebe obibi nwere ezigbo PVC resin, site na mgbaze na mgbaze dị elu, kpụrụ n'ime eriri silk nke ejikọtara na nkwado PVC, mgbe ọtụtụ usoro mara mma. Ngwaahịa agbakwunyereghị mmanụ paraffin oxidized, nke na -emerụ ahụike, yana ahụike yana enweghị isi. Mpekere na ngwaahịa ndị a tụfuru bụ resin thermoplastic recyclable.